Suuragal ma tahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacda Soomaaliya? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka PMO
Image caption Xaliimo Yarey- Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya
Xilli doorashada Soomaaliya ka harsan tahay sanad ayaa wali waxaan kala cadeyn nooca doorasho ee uu dalka yeelanayo, maadaama sharciga doorashada uu horyalao barlamaanka, dhawaanna la filayo in uu go'aan ka gaaro.
"Tallaabada xigta waxaa waye in aan helno shuruuc, doorasho, dastuurka kumeel gaarka ahaa waa jiraa, sharciga gudidga doorashada uu ku shaqeynayay waa jiraa, waxaa naga maqan sharciga doorashooyinka oo barlamaanka horyaalla, oo noo madalsan in aan helno bisha Diseemabr, tallaabada xigta waxaa waaye in aan sameyno diiwaangelinta", ayay BBC-da u sheegtay Xaliimo Yarey.
"Tirada aan helno ee Soomaaliyeed ee timaada goobaha codbixinta aan cayimi doonaa oo nabadgelyada iyo siyasadda noo saamaxdo ayaa sheegi karn inta qof ee aan diiwaangelinay, annaga waxaa ku hamineynaa ilaa laba milyan oo Soomaali ah ama ka badan in aan helno", ayay raacisay.
Image caption Hogaamiyaha xisbiga Wadajir
Inkastoo guddiga doorahsada uu u muuqdo in uu doonayo in dalka uu ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah, haddii barlamaanka uu meelmariyo sharciga doorashada ee horyaalla ayaa hadana qaar kamid ah dhinacyada siyaasadda waxaa ay su'aal geliyeen suurtagalnimada arrintaas.
"In doorasho qof iyo cod ah dalka looga qabto, waa in tirakoob la sameeyo, diiwanagelin in la sameeyo, sharciga jinsiyadaha in la sameeyo, dhaqaalaha waxaas oo dhan sababi lahaa la helo, in heshiis siyaasad la gaaro oo dhinacyada siyaasadda oo ay ka mid yihiin Dowladda Federaalka, Dowlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadda ay gaaraan", ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi-Shakuur.
Lahaanshaha sawirka Xasan Sheekh Cali
Image caption Xasan Sheekh Cali